​​​​Sidii Guddida Socdaalka iyo Qaxootiga Canada (IRB) waxay bilaabaysaa qabashada dhegaysiga qof ahaaneed, tallaabooyinka caafimaadka iyo badbaadada la diyaariyay si loo ilaaliyo ka qayb galayaasha qolka dhegaysiga.
Ka hor dhegaysiga: Dhammaan kooxaha imanay IRB horteeda waxaa looga baahan doonaa inay buuxiyaan su’aalaha xog ururinta is qiimaynta, marka koowaad ee ay helaan Ogaysiiska in La yimaado iyo ka dib marka la yimaada xafiisyada IRB. Tani waxay qiimayn doonaa:
haddii aad xidhiidh la samaysy qof dhawaan lagu aqoonsaday COVID-19.
Waa inaad timaadaa 30 daqiiqadood ka hor wkhtiga bilowga dhegaysiga ee lagu sheegay Ogaysiiskaaga Imaanshaha.
Maaskareetiyada aan caafimaadka ahayn waxaa looga baahan yahay dhammaan meelaha dad waynaha oo waxa ala heli doona amarka la codsado.
Had iyo jeer u jirsato 2 mitir (6 fuudh) kala fogaanta jidhka ah ee u dhaxaysa naftaada iyo dadka kale jooga.
Raac calaamadaha tilmaanta dabaqa, calaamadaha gidaarka, iyo tilmaama kasta oo ay ku siiyaan shaqaalaha IRB iyo waardiyayaasha amniga.
Dhammaan booqdayaasha waxa ala waydiin soonaa inay buuxiyaan su’aalaha xog ururinta is qiimaynta ah markay yimaadaan.
Dakdka maqalka ka liita ama la xidhiidhaya qofka maqalka ka liita, oo halka kartida in afka la arko ay lama huraan u tahay wada xidhiidhka.
Raac dhamman tilmaamaha ku yaal jidkaaga dhanka wiishka korida guriga ama qolka dhegaysiga.
Tallaabooyinka badbaadada, sida xadidka tirooyinka dadka, waxa uu ahaan karaa diyaar. Fadlan raac dhammaan calaamadaha iyo tilmaamaha ee isticmaalka wiishashka ah.
Waxaa waardiyaha amnigu ku waydiin doonaa inaad nadiifiso gacmahaaga ka dib dhammaystirka su’aalaha xog ururinta. Heerkulka wejigaaga sidoo kale waa lagula socon doonaa kamaran aan ku taaban oo shucaac leh.
Iyaddoo ku salaysan waayo aragnimada iyo faallo celinta daneeyayaasha iyo shuraakada, IRB waxay dib ula bilaabaysaa dhegaysiga qof ahaaneed xubnaha iyo turjubaanada gudaha qol dhegaysi oo isku mid ah sida la taliyaha iyo dacwoodayaasha.
Gudaha qolka dhegaysiga tallaabooyinka kala fogaanshaha ayaa diyaar ah. Muraayda aanay waxba ka soo tafin ayaa la geliyay gudaha dhammaan qolalka dhegaysiga. Qalabka maqalka gudaha qolalka dhegaysiga dib ayaa loogu xidhay si loo oggolaado duubista wanaagsan. U hadal si cad oo qaylo dheer markaas go’aan gaadhahu waxa uu awoodayaa inuu kaa dhex maqlo shaashada. Sida uu yeelo xubinta guddoominaysa, shakhsiyaadka ka qayb gelayaah dhegaysiga waxaa la waydiin karaa inay si ku meel gaadh ah isaga saaraan maaskareetiga si ku meel gaadh ah —tusaale ahaan, si loo caddeeyo dhibta maqalka — si loo xaqiijiyo dhegaysiga buuxa ee saxda ah.
Marka dhagaysiga la dhammeeyo, waardiyaha amnigu waxa uu ku waydiin doonaa inaad ka baxdo qolka dhegaysiga oo aad ka tagto dhismaha sida degdega ah ee suuragalka ah addoo raacaya calaamadaha tilmaanta ah oo waa inaad xaqiijisaa inaad leedahay maaskareetigaaga.
Qolalka dhqida iyo qasabadaha biyaha